मोदी, भो सस्तो ललिपप नखुवाऊ मधेशलाई
अभिशेक जोशी, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर विकासको लागि १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । शुक्रबार जनपुरस्थित बाह्रविघा मैदानमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन थप्दै मोदीले नेपालमात्र होइन छिमेकी क्षेत्रकै विकासका लागि आफू सधै सकारात्मक रहेको दाबी गरे । मोदी भाषणको पानी नचुहिने खालको हुन्छ । मोदी नेपाल भ्रमणमा मात्र होइन अमेरिकी,जापान र चीन लगायत देशको भ्रमणका क्रममा पनि मासमूखी भाषण गर्न निकै खप्पिस छन् । भाषणमा उनी ताली निकै खान्छन् । तर, व्यवहार त्यस्तो छैन जस्तो उनी बोल्छन् ।
यसअघि नेपालमा भुकम्पको बेला पुनःनिर्माणका लागि पनि १ सय करोड भारु सहयोग दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, आजसम्म त्यो रकम नेपालले पायो वा पाएन, नागरिक तहमा जानकारी छैन । जनभावना अनुसार भाषण दिन माहिर मोदीले जनकपुरमा पनि विकासका थुप्रै ललिपप बाँडेका छन् । सर्वसाधारण पर्रर ताली पिट्छन्..... । जलमार्ग र रेलमार्ग मात्रै होईन, पेट्रोलियम सप्लाईका लागि विहारको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पाईपलाईन विछ्याउने कामले तीव्रता पाएको उनले जनाएका छन् ।
भारतमा दश करोड भन्दा बढी भिकारी छन् भनिन्छ । त्यति मात्रै होईन, भारतमा हरेक वर्ष ५ हजार बढी किसानहरु आत्महत्या गर्ने गर्दछन् । हरेक दिन थुप्रै बलात्कारका घटनाहरु भईरहने मुलुक पनि हो भारत । यस्तो अवस्थामा नेपालको गरिबी हटाउने घोषणा गर्नु मोदी आप्mनै लागि पनि एउटा व्यङ्ग्य जस्तो लाग्छ । किनभने नेपालमा गरिबी जरुर छ तर भीख माग्ने अनि आत्महत्या गर्ने तहको गरिबी छैन् । यहाँको विकासका लागि चट्टान नै फोड्नु पर्ने जटिलता छैन । सरकारले ईमान्दार प्रयास गर्ने हो भने नेपालका नागरिकहरुको जीवनस्तर केहि वर्षमै सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, आप्mनो मुलुकका गरिबहरुको आर्थिक अवस्था सुधार नगरी नेपालको गरिबी हटाउन मदत गर्ने वाचा निकै हलुका खालको छ ।
कसले दियो जनकपुर सिँगार्ने पैसा मोदीको स्वागत कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन प्रदेश सरकारसँग बजेट कहाँबाट आयो ? कसले पैसा दियो ? यो कुरो अहिले पनि खुलेको छैन । नेपाल सरकारसँग यस कामका लागि खासै समन्वय नगरेको प्रदेश सरकारलाई पक्कै पनि भारतबाट नै पैसा आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस अभ्यासले प्रदेश नम्बर दुई नेपाल सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्र राज्यको अभ्यासमा रमाउन खोजीरहेको छ वा त्यसकै लागि उसलाई उक्साउन थालिएको छ कि भनेर हामीले आशंका गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भाषणमा मोदीले भनेको छन्–केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर एक सय करोडको परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भारतीय पक्षको पनि सहभागीता रहनेछ । विज्ञ टोलीले परियोजनाका लागि स्थानहरुको पहिचान गरे पछि विकासका कामहरु हुनेछन् । ती कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि तयार पारिने योजनाहरुमा केन्द्र सरकार र मधेश सरकारबिच मतैक्य होला भनेर भन्न सकिन्न । काठमाडौँलाई के दिन्छन् मोदी ? भुकम्पबाट थलिएको काठमाडौँले नाकाबन्दीको गहिरो चोट पनि खानुपरेको थियो । त्यस पीडालाई अहिले पनि काठमाडौँले भुल्न सकेको छैन ।
मोदीले नाकाबन्दी गलत थियो भन्दै माफी नमागेसम्म काठमाडौँले मोदीलाई हार्दिक स्वागत गर्ने छैन । यो कुरो मोदीले पनि सहजै बुझेका छन् । जसरी जनकपुरलाई खुसी पार्न उनले एक सय करोडको ललिपप फालेका छन् । त्यसरी नै काठमाडौँलाई खुसी पार्न पनि कुनै न कुनै सहयोगको ललिपप फाल्ने छन् । कुन सहयोगको ललिपप फाल्नेछन् ? मादी जी भो अव बन्द गर्नोस अब यो सस्तो ललिपप खुवाऊने काम ।
प्रकाशित २८ बैशाख २0७५ , शुक्रबार | 2018-05-11 10:47:56